ရေရှည်တည်တံ့သော ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက် | ကျွန်ုပ်တို့၏ တန်ဖိုးထားမှုများ | Samsung Myanmar
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ကြမ်းအချက်အလက်များကို ကျင့်ဝတ်ညီစွာနှင့် တာဝန်ညီစွာ ရယူကြောင်း သေချာစေပါသည်
ယုံကြည်အားထားလောက်သော ကော်ပိုရိတ် ဂေဟစနစ်တစ်ခုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ပေးသွင်းမှု ကွင်းဆက်ကို တည်ဆောက်ရန် အလို့ငှာ ပိုအားကောင်းသော ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည့် အခြေအနေကို တည်ဆောက်ရန် ပေးသွင်းသူများကို ပံ့ပိုးပါသည်
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မျှတမှု၊ ပွင့်လင်းမှုနှင့် ပူးတွဲကြွယ်ဝမှုဆိုသည့် အယူအဆပေါ် အခြေခံ၍ ရေရှည်တည်တံ့သော လုပ်ငန်း ဂေဟစနစ်တစ်ခုအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေး တာဝန်များ ပြည့်မီစေရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စံနှုန်းများနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများကို ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က ဘေးအန္တရာယ်များသည့် နယ်မြေများရှိ သတ္တုတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို လျှော့ချရန် ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးကိုလည်း လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အမြန်နှုန်းနှင့် အကျိုးများမှုကို အမြင့်ဆုံးမြှင့်ရန်လို့ငှာ ကုန်ကျစရိတ်၊ ပို့ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေး၊ နည်းပညာနှင့် လူသားရင်းမြစ်များတွင် အလုံးစုံလွှမ်းခြုံကာ အများနှင့်ယှဉ်ရာတွင် နှာတစ်ဖျားသာမှုကို သေချာစေပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော တိုးတက်မှု ဖြစ်စေသည့် ကော်ပိုရိတ် ဂေဟစနစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါသည်။
ပေးသွင်းမှုကွင်းဆက် တစ်လျှောက်တွင် ပေးသွင်းသူအားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်သည့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော စီမံခန့်ခွဲရေး တာဝန်ယူမှုစနစ်ကို တည်ဆောက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူသားရင်းမြစ် စီမံခန့်ခွဲရေး၊ အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျင့်ဝတ်များနှင့် ပဋိပက္ခများသော သတ္တုတွင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် နယ်ပယ်များတွင် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာဖို့ တောင်းဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ပေးသွင်းသူများ၏ အစိတ်အပိုင်းငယ်များ၊ ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဖြစ်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို ရယူအသုံးပြုပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန် အလို့ငှာ Eco Partner-ထောက်ခံချက်ရ ပေးသွင်းသူများနှင့်သာ လုပ်ကိုင်ပါသည်။
Samsung Electronics သည် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့် ပေးသွင်းသူများနှင့် ဗျူဟာကျကျ လက်တွဲလုပ်ကိုင်မှုများ တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများ၏ အများနှင့်ပြိုင်လျှင် နှာတစ်ပန်းသာနိုင်မှုကို အားဖြည့်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ကူညီရန် နှစ်ပတ်လည် အကဲဖြတ်မှုများ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ပေးသွင်းသူအသစ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူ မှတ်ပုံတင်ရေး စနစ်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် မျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံကျင့်သုံးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့၏ မတူကွဲပြားသော နည်းပညာ လုပ်နိုင်စွမ်းကို လက်တွေ့ယူဆောင်လာပြီး Samsung နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်လိုသည့် ကုမ္ပဏီတိုင်းက ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းအဆိုပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူ ပေါ်တယ် (www.secbuy.com) တွင် အချိန်မရွေး ပို့စ်တင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှာဖွေရယူရေး စင်တာ (IPC) သည် ရှာဖွေရယူရေး ဗဟိုချက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး IPC သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ဗျူဟာအရ အရေးကြီးသော ဒေသများတွင် ထူးချွန်သော ပေးသွင်းသူများကို ရှာဖွေတွေ့နိုင်စေပါသည်။
ပေးသွင်းသူအသစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ
အလုပ်အကိုင် ဘေးကင်းရေး၊ မီးဘေး ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ကိရိယာ၊ အလုပ်အကိုင် ကျန်းမာရေး၊ အန္တရာယ်များသော ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းကို ထပ်တိုးခြင်းဖြင့် ပိုဒ်ခွဲ 22 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက် ပြည့်မီအောင်လုပ်ရန် ပေးသွင်းသူများကို တောင်းဆိုပါ။ မဖြစ်မနေ လေးစားလိုက်နာရေး အချက်ကိုးခု- မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်း၊ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း၊ အညစ်အကြေးနှင့် ရေဆိုးသန့်စင်ရုံ၊ အစရှိသည်တို့။
ပေးသွင်းသူများအား ဆန္ဒအလျောက် အလုပ်၊ အလုပ်ချိန် စည်းမျဉ်းများ လေးစားလိုက်နာမှုနှင့် ခွဲခြားဆက်ဆံရေး တားမြစ်ချက်တို့ အပါအဝင် ပိုဒ်ခွဲ 20 တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြည့်မီအောင်လုပ်ရန် တောင်းဆိုပါ။ မဖြစ်မနေ လေးစားလိုက်နာရေး အချက်သုံးခု- ကလေးလုပ်သား တားမြစ်ချက်၊ အာမခံထားသော အနည်းလုံး လုပ်အားခနှင့် လူသားမဆန်သော ဆက်ဆံမှုအပေါ် တားမြစ်ချက်။
ထုတ်ကုန် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ ပညာရေးနှင့် သင်တန်းအပြင် အန္တရာယ်များသော ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ ပြုလုပ်ပါ။ Eco-Partner ထောက်ခံချက်ရ ပေးသွင်းသူများနှင့်သာ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပါ။
နှစ်ပတ်လည် ပေးသွင်းသူ အကဲဖြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်
ပေးသွင်းသူများသည် လုပ်ငန်းပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုသက်ဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ရေး အချက်များပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်မှု ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ပေးသွင်းသူများသည် လိုအပ်သော တိုးတက်ဆောင်ရွက်မှုများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်ပြီး တိုးမြှင့်မှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ Samsung သည် ဘေးအန္တရာယ်များကို စောင့်ကြည့်ပြီး တုံ့ပြန်ချက်ပေးပါသည်
ပေးသွင်းသူများအား ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံး ကိုယ်ပိုင်ရလဒ်များကို နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ခါနီးတွင် အသိပေးပါသည်
ပေးသွင်းသူများသည် တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ဖန်တီး အကောင်အထည်ဖော်ပြီး Samsung က အထောက်အပံ့ပေးပါသည်
လုပ်ငန်း အများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုအတွက် အကဲဖြတ်ရေး အချက်များ
နည်းပညာ မှတ်ပုံတင်မူပိုင်များ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် R&D ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
မအောင်မြင်နှုန်းများနှင့် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ် ထောက်ခံချက်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု
အချိန်မီ ပို့ဆောင်မှုနှင့် အချိန်မီ ပို့ကုန်
အရောင်းအဝယ်တန်ဖိုး တိုးလာမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တွင် အများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု
ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် အကဲဖြတ်ရေး အချက်များ
အလုပ်ခွင် ဘေးကင်းရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ထောက်ခံချက်
အကြွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပေးချေရန်ငွေ အချိုး
လုပ်သားနှင့် အလုပ်ခွင်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးများနှင့် အကျင့်ပျက်မှုဆန့်ကျင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များအား အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန် ပံ့ပိုးခြင်း
‘Samsung Electronics တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အများထက်နှာတစ်ဖျားသာမှုက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများ၏ အများထက်နှာတစ်ဖျားသာမှုမှု ဖြစ်လာသည်’ ဆိုသည့် အယူအဆဖြင့် လုပ်ကိုင်ရန်၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြား ပေးသွင်းသူ နှစ်မျိုးလုံးကို ပါဝင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်ဖက်စလုံး အောင်မြင်သည့် စီမံခန့်ခွဲရေး ပဏာမလုပ်ဆောင်မှုများကို နယ်မြေတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများက ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့က ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ပညာရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ပံ့ပိုးရန် ပရိုဂရမ်များစွာ စီစဉ်ပေးပါသည်။
နှစ်ဖက်စလုံး အောင်မြင်သည့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ရန်ပုံငွေတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
စီးပွားရေးဘဏ်များဖြင့် KRW 1 ထရီလီယံ
တန်ဖိုးရှိသည့် ရန်ပုံငွေများ ဖန်တီးသည်
ဝန်ထမ်း လုပ်နိုင်စွမ်း တည်ဆောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူ သီးသန့် သင်တန်း အထောက်အပံ့ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု၊ အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှု၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် အခြား သင်ရိုးများ ပံ့ပိုးပေးသည်
Samsung ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်နိုင်စွမ်းကို
တိုးတက်စေခြင်းဖြင့် နိုင်ငံအနှံ့တွင် ၎င်း၏
လုပ်ငန်းဆက်ဆံမှုမရှိသည့် ပေးသွင်းသူ 1,000 ဦးနှင့် SME များကို ထောက်ပံ့သည်
[2020 ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိက နှစ်ဖက်အောင်မြင်ရေး ပရိုဂရမ်များ၏ ရလဒ်များ]
* ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့် 1 နှင့် အဆင့်2ပေးသွင်းသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုက်ရိုက်ဖုန်းလိုင်း (+82-80-200-3300) ဖြင့်၊ အီးမေးလ် (ssvoc@samsung.com) မှဆင့်၊ ပေးသွင်းသူပေါ်တယ် (www.secbuy.com) ရှိ အွန်လိုင်း အသိပေးပြောကြားရေးစနစ်မှတဆင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ပေးသွင်းသူ အကြံပေးချက်များနှင့် အမျိုးမျိုးသော အပြန်အလှန် တွေ့ဆုံမှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏ မကျေနပ်ချက်များကို ဖွင့်ဟပြောရာတွင် ပေးသွင်းသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကူအညီပေးပါသည်။
ပေးသွင်းသူ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းညွှန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် RBA ၏ ပေးသွင်းသူ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများထံ နောက်ဆုံးရအခြေအနေများကို မျှဝေပေးသွားပါမည်။ ၎င်းတို့က စည်းကမ်းနှင့်အညီ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်နှင့် လေးစားလိုက်နာရေး စီမံခန့်ခွဲမှုကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် လမ်းညွှန်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ပေးသွင်း လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့် လမ်းညွှန်
လူတိုင်းအတွက် ဘေးကင်းသော အလုပ်ခွင်တစ်ခု ဖြစ်စေခြင်း
ကိစ္စရပ်များကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ပြီး လိုအပ်သော တိုးတက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် RBA (တာဝန်သိသော လုပ်ငန်း မဟာမိတ်) ၏ အတည်ပြုမှု စံနှုန်းများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူအားလုံးကို ပုံမှန် စောင့်ကြည့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က အဆင့် 1 ပေးသွင်းသူများအား ဘေးကင်းသော အလုပ်ခွင်တစ်ခု ဖန်တီးရန် တိုက်တွန်းအားပေးနေစဉ် အလုပ်ခွင်ဘေးကင်းရေးအတွက် အဆိုပါ ကတိကဝတ်ပြုမှုက ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်2ပေးသွင်းသူများကို အဆင့် 1 ပေးသွင်းသူများ နည်းလမ်းဖြင့် တိုးချဲ့ပေးသည်။
85 RBA စံသတ်မှတ်ချက်ပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းကို အသုံးပြုသည့် ပထမအဆင့် ပေးသွင်းသူအားလုံး၏ နှစ်စဉ် ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်မှု
တိုးတက်ရေး အလုပ်တာဝန်များကို ဖော်ထုတ်ရန် အဆင့်မြင့် ပေးသွင်းသူများကို အလုပ်ခွင်တွင်း စိစစ်မှုများ။
ဘေးအန္တရာယ်များသော ပေးသွင်းသူများ- လုပ်ငန်း ပမာဏ သို့မဟုတ် မှီတည်မှုပေါ် မူတည်၍ သက်ရောက်မှုမြင့်မားသည်၊ ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ အန္တရာယ်များသော ဧရိယာတွင် တည်ရှိသည်၊ ကိုယ်တိုင် အကဲဖြတ်မှုဖြင့် အဆင့်နိမ့်သည် သို့မဟုတ် စွပ်စွဲချက်တွင် ပါဝင်သည်
RBA လက်မှတ်ရ စိစစ်သူများက ဦးဆောင်ပြီး လွတ်လပ်သည့် သတ်မှတ်ထားသော စိစစ်ရေး ဝန်ထမ်းက ဆောင်ရွက်သည်
တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ စုစုပေါင်း အရေအတွက်၏ Square root (စတုရန်းကွင်း)
RBA လက်မှတ်ရ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စိစစ်ရေး လုပ်ငန်းများက ပေးသွင်းသူများကို ကျပန်းရွေးချယ်ပြီး RBA စံသတ်မှတ်ချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကနဦး စိစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်သည်
ပစ်မှတ်၏ ရွေးချယ်မှုကိုသာ ကြေညာပြီး 2015 မှစတင်၍ ပို၍တိကျသော စိစစ်မှုများကို သေချာစေရန် သီးခြား အချိန်ဇယားကို မမျှဝေပါနှင့်
ချက်ချင်း ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အလုပ်များအတွက် ချက်ချင်း အရေးယူဆောင်ရွက်ပါ။ ရလဒ်များသည် စိစစ်မှုပြီးသည်နှင့် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
တွင်းထွက်ပစ္စည်းများကို တာဝန်သိစွာ ရယူခြင်း
Samsung Electronics သည် 'ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော နေရာများမှ တွင်းထက်ပစ္စည်းများ၏ တာဝန်သိသော ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကွင်းဆက်များအတွက် OECD ကြိုတင်စိစစ်မှု လမ်းညွှန်ချက်' ပေါ်အခြေခံ၍ တွင်းထွက်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူလုပ်ကိုငသ်ည့် ပေးသွင်းသူများဖြင့် ကုန်စည်စီးဆင်းရေးကွင်းဆက်တွင် အရည်ကျိုဖိုများကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများ အပါအဝင် ပါဝင်ပတ်သက်သူအမျိုးမျိုးထံ အရည်ကျိုဖိုစာရင်းကို လက်ရှိတွင် မျှဝေပေးနေပါသည်။ ထို့အပြင် ပေးသွင်းသူများအား RMAP (စိတ်ချရသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အာမခံ လုပ်ငန်းစဉ်) ဖြင့် ထောက်ခံချက်ရထားသည့် အရည်ကျိုဖိုများနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် တိုက်တွန်းအားပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်စည်စီးဆင်းရေး ကွင်းဆက်တွင် ထောက်ခံချက်မရသေးသော အရည်ကျိုဖိုများကို RMAP ထောက်ခံချရအောင်လုပ်စေလိုပါသည်။ အရည်ကျိုဖိုစာရင်းနှင့် အခြားအချက်အလက် အပါအဝင် စိတ်ချရသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ သတင်းပေးပို့ချက်သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အဟန့်အတား သံသယမကင်းသည့် တွင်းထွက်ပစ္စည်း တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ၏ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အပျက်သဘော သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် Samsung Electronics ၏ ကြိုးပမ်းမှုများကို ဖော်ပြပါသည်။
OECD ကြိုတင်စိစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ် အခြေခံ၍ Samsung Electronics ၏ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ကြိုတင်စိစစ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
01. ပေးသွင်းသူများ၏ သတိပြုမိမှုကို မြှင့်တင်ပါ
ပထမအဆင့် ပေးသွင်းသူအားလုံးထံမှ ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသည့် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်ရန် ပေးသွင်းသူများထံမှ ကတိပြုမှုကို ရယူထားပါ
ပဋိပက္ခရှိသော နယ်မြေများနှင့် အန္တရာယ်များသော တွင်းထွက်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲရေး လမ်းညွှန်ကို ဖြန့်ဝေပြီး အလုပ်လုပ်သည့်အဆင့်အလိုက် သင်တန်းကို ပံ့ပိုးပါ
အဆင့်နိမ့်ပေးသွင်းသူများအား ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို တားမြစ်သည့် မူဝါဒကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် ကျင့်ဝတ်ညီစွာနှင့် တာဝန်သိစွာ ရင်းမြစ်ရယူရန် တောင်းဆိုပါ
02. ပေးသွင်းမှု ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်တွင် ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို စစ်ဆေးပါ
ပထမအဆင့် ပေးသွင်းသူအားလုံး၏ ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ဒေတာများအပြင် ပေးသွင်းသူကွင်းဆက်နှင့်အတူ အရည်ကျိုဖိုများ၏ အဆိုပါ တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ပါ
03. စစ်ဆေးရေး ရလဒ်များအတွက် တာဝန်သိသော ကြိုတင်စိစစ်မှုနှင့် အတည်ပြုမှု လုပ်ဆောင်ပါ
ပေးသွင်းသူများက တင်သွင်းသည့် ဒေတာများအပေါ် အလုပ်ခွင်တွင်း စစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ပါ
ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ပေးသွင်းသူများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် အကောင်းဆုံး ကျင့်ထုံးများကို ဖော်ထုတ်ပြီး မျှဝေပါ
04. ပေးသွင်းသူကွင်းဆက်အတွင်း အန္တရာယ်များသော အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပြီး ချင့်တွက်ပါ
ပေးသွင်းသူများကို စစ်ဆေးမှု ရလဒ်များပေါ် အခြေခံ၍ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အုပ်စုလေးခု အမျိုးအစားခွဲခြားပါ (တင်သွင်းထားသည့် ဒေတာများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ပဋိပက္ခရှိပြီး အန္တရာယ်များသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေး အဆင့်ပေါ် အခြေခံ၍)
05. အန္တရာယ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်များကို ဖန်တီးရေးသားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာများကို သတင်းပေးပို့ပါ
ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းက စိစစ်မထားသည့် အရည်ကျိုဖိုများနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်သည့် ပေးသွင်းသူများနှင့် အရောင်းအဝယ်များကို တားမြစ်ပါ
ပေးသွင်းရေးကွင်းဆက်အတွင်းရှိ အရည်ကျိုဖိုများအား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ထောက်ခံချက်ရအောင်လုပ်ရန် အကြံပြုပါ
Samsung Electronics ၏ တာဝန်သိသော တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ သတင်းပေးပို့ချက်
အရည်ကျိုဖိုနှင့် သန့်စင်ဖို စာရင်း
(ဒီဇင်ဘာလ 2020 အရ)
ပေးအပ်ခဲ့သည့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ဆောင်ရွက်ဆဲ
ရေရှည်တည်တံ့သော ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ရေရှည်တည်တံ့သော ကုန်စည်စီးဆင်းမှု